Toban Talo Oo Ku Socda Madaxweyne Muuse Iyo Xukuumaddiisa.. !! W/Q: Saleebaan Kalshaale | Dhamays Media Group
Waxa aan la hadlayaa Madaxweynaha cusub iyo Xukuumaddiisa, waxaan leeyahay ‘maanta Xilku maaha siyaasi’
Laga soo bilaabo sanadkii 2014-ka, waxa aan safarro shaqo oo kala duwan ku tegay Gobollada dalka badankooda, gaar ahaan Deegaamo badan oo hoos-yimaadda Gobolada Maroodi-jeex, Saaxil, Awdal iyo Togdheer, kuwaaasoo aan inta badan u tegay booqasho-howleedyo qayb ka ahaa xaqiiqo-raadintii gurmadka Abaaraha oo aan si mutadawacnimo ah deegaamo badan u tegay si aan xaallada Bulshooyinka ugu kuur-galo, ugana soo gudbiyo warbixinno.
Waxa kale oo jiray kormeerro Saxaafaddeed oo aan ku tegay Gobollada qaar markii ay Diwaan-gelinta codbixiyeyaashu socotay, ujeeddaduna waxay ahayd in aan xog ka hello sida Bulshada loogu wacyi-geliyey Diwaan-gelinta iyo fikirka ay shacbigu ka aaminsan yihiin Doorashooyinka.
Guud ahaan socdaallaydaas oo ku jaan-go’naa xog-urruurin, xaqiiqo-raadin iyo wacyi-gelin, waxaan ka bartay dhowr arrimood oo aan filayo inaanay dadka badankiisu darreensanayn, waxaana kamid ah:
Inaanay Dawladnimadu si fiican u gaadhin, isla markaana uga shaqaynin Degmooyinka iyo deegaamada ka baxsan Caasimadaha Gobollada dalka
Inaanu wanaagsanayn ama aanu jirrinba xidhiidhka Dawladda iyo shacbiga reer guuraaga ah ama Beeralayda ah ee ka durrugsan magaalooyinka waaweyni, hadduu jirrona ahayn xidhiidh ku dhisan habkii loo baahnaa.
Inaan adeegyada dawladdu bixisaa dhaafin Magaalooyinka waaweyn, hadday dhaafaanna aanay ahayn kuwo tayo iyo tamar fiican leh.
Waxaan ogaaday in Dadka xoollo-dhaqata ahi Dawladda u yaqaannaan shay manficiisa Dadka xilalka hayaa ku nool yihiin, iyaguna waa dadka aanay dawladnimadu saameynne loo baahdo marka codka laga doonayo.
Waxaan ogaaday inaanay Bulshadaasi wax rejo ah ka qabin waxqabad dawladnimo oo dhaafsiisan Jiidh-jiidhka xilliga lagu jiro Ololleyaasha Doorashada.
Waxaan ogaaday in Hay’adaha Ajaanibka ah ee dalka joogaa kuwa Dawladda uga xoggogaalsan yihiin baahiyaha ka jira Deegaamada dalka qaarkood oo aad arkayso meello laga fuliyey mashaariic ay Hay’ado ajaanib ah hir-geliyeen oo aanay ka muuqan raadadkii dawladda dalka xukuntaa.
Waxaan ogaaday inaanay Hay’adaha nabad-gelyada iyo kuwa arrimaha Bulshada ee Dawladdu si fiican uga howl-gelin badi Degmooyinka iyo tuullooyinka dalka ee ay shaqadoodu ku kooban tahay Magaalooyinka waaweyn.
Waxaan booqday Magaalooyin go’doon kaga jira dalka intiisa kale oo aan Xafiis dawladdeed ka furnayn, dadkuna ii sheegeen inay cid dawlad ka socota arkaan marka Doorasho jirto oo qudha, waxaanan tusaale u soo qaadanayaa Tuulada la yidhaahdo DALLAW oo ku taalla Buuralayda Koonfureed ee Gobolka Saaxil, sidaan filayana hoos-tagta maamul ahaan Degmada Abdaal.
Deegaankaas waxa ku dhaqan Bulsho Beer-xoollo dhaqato ah. Nawaaxiga Tuullada DALLAW waxa ku yaalla Beero badan oo khudraddu ka baxdo, waxaana aad uga baxa Cambaha iyo noocyada kale ee Khudaarta.
Gudaha tuulada waxa deggen Dad lagu qiyaasay laba kun oo Qoys, waana magaalo wakhti badan jirtay oo Ganacsi leh.
Sidaasoo ay tahay, Saldhig Boolis kuma yaallo Tuulada, Xafiis dawladeed oo kalena hadalkiisaba daa.
Dadka Tuuladu waxay ii sheegeen inay aaminsan yihiin inay Dawladda Somaliland u shaqayso Dadka deggen Laamiga iyo Magaallooyinka waaweyn “annagu Taakullo iyo Tacab kale toona kama helno Dawladda aad sheegayso…maalinta Doorashada ayuunbaanu aragnaa Dad cod naga doonaya” sidaas ayey ii sheegtay Haweenay Meherad yar oo bagaashka lagu Iibiyo ku haysata badhtamaha Magaaladaas.
Tobannaan Degmo iyo deegaan oo kale oo aan midka ugu yar saacado la sheekaystay Shacbiga ku nool, ayaan kala kulmay cabashooyin iyo cuqdad laga qabo Dawladda, iyadoo dhaliilshana marba Xisbiga xukunka haya ama Madaxweynaha la saaro.
Haddaba, anigoo ka duulaya xoggogaalnimadayda xaaladda dhabta ah ee ka jirta berriga ka baxsan Bandarada waaweyn ee iyagaba baahida aasaasiga ah laga cawdo, waxaan jeclaystay inaan Madaxweynaha cusub ee xukunka la wareegay Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Gollihiisa Xukuumadda la wadaago talo-soo-jeedin kooban oo wax lagaga qabanayo arrimahaas.
Sidaas-darteed marka hore, Madaxweynaha iyo Golaha Wasiirrada cusub waxaan leeyahay Hambalyo, xilalka Alle ha idiin fududeeyo.
Marka labaad Madaxweynaha waxaan ku hambalyeynayaa oo ay Bulshada inteeda badani ku bogaadinaysaa xubnaha uu u xushay Golaha Xukuumadda oo u badan dhalinyaro aan odhan karno waa dad xoggogaal u ah xaaladda dhabta ah iyo xaqiiqada ay la noolshahay Bulshada Somaliland.
Marka saddexaad, waxa Madaxweynuhu ammaan ku mudan yahay inuu Golaha Wasiirrada u magacaabay Ashkhaas aan Baasaaboorro kale haysan, isagoo meesha ka saaray qurbe-jooggii dalka qabsaday toddobadii sanandood ee Xukuumaddii Madaxweyne Siilaanyo talada haysay.
Marka afraad, waxa Madaxweynaha in lagu bogaadiyo oo lagu hambalyeeyo mudan arrinta ku saabsan in Golaha Wasiirradu Hantidooda gaarka ah Diwaan-geliyaan, inta aanay xilalka la wareegin, waxaanan qodobkaa ku takiidin lahaa inay Bulshadu markhaati ka noqoto arrintaas oo qalabka Warbaahinta lagu soo bandhigo intii suurto-gal ah Hantida masuuliyiinta la magacaabay, si ay meesha uga baxdo saska iyo su’aasha laga qabo xatooyada ama musuqmaasuqa Hantida umadda, masuulka lagu qabto hanti-lunsinna hadhow Maxkamadda loo wada saarro.
Talo iyo Tilmaamo
Intaa markaan ka imaaddo, waxaan talo iyo tilmaamo uga dhigayaa Madaxweynaha iyo Golihiisa cusub qodobbadan soo socda;-
waxa idiin taalla shaqo culus oo u baahan dedaal iyo deraasad hor leh.
Wuu dhamaaday wakhtigii Siyaasaddu, waxa la gaadhay xilligii Shacbiga loo shaqeyn lahaa ee la fahmi lahaa micnaha dawladnimada ee uu Muwaadinku heli lahaa xaqiisa, isna baran lahaa xaqa lagu leeyahay.
Shaqada dawladdu maaha Xafiiska oo la fadhiyo, Waraaqo la is dhaafsado iyo Mashaariic Hay’adaha laga dalbado, balse waa Abaabul, Wacyi-gelin iyo Jiheyn, taasoo ah dhabbaha lagu gaadhayo wax-qabsiga iyo isku-filnaanshiyaha dal.
sidoo kale Shaqada dawladdu, waa ‘hoggaamin, heggid ,haggaajin iyo hir-gelin’.
sidaas darteed, Wasiirrada cusub iyo masuuliyiinta kale ee Dawladdaba waxa laga rabaa inay dib ugu noqdaan bulshada oo ay xog-ogaal u noqdaan nolosha ay ku nooshahay ee looma baahna inay Xafiisyada fadhiyaan oo ku sugaan shaqada.
Waxa laga rabaa inay dhamaantood noqdaan shaqaale u carbisan maamulka iyo hoggaaminta.
Waxa laga doonayaa inay shaqaalaha Wasaarradahooda ku hoggaamiyaan fulinta adeegga ee looma baahna inay Hudheellada Bunka iyo Liinta ku cabbaan, sidii looga bartay ama dhaqanka u ahayd Masuuliyiin badan oo ka tirsanaa Xukuumadda xilka wareejinaysa.
Waxa laga rabaa inay dawladda iyo dadka isgaadhsiiyaan oo Shacbiga lagu carbiyo bixinta Cashuurta iyo Tacabka, taasoo qayb ka ah hannaanka Maamul-daadejinta.
Madaxweynaha iyo Xukuumaddiisa waxa looga fadhiyaa, lagana filayaa inay Shacbiga ku soo dabbaalaan dhaqanka suubban iyo Asluubta, lagana saaro qabyaaladda iyo fool-xumada sida Fayriska ugu fidday oo diciifiyey awooddii dadnimo iyo wada-noolaanshihii Bulsho.
Madaxweynaha cusub waxaan kula talin lahaa inuu Laamaha Xisbigiisa ee Gobollada iyo Degmooyinka awood loo siiyo inay madaxda Xafiisyada Dawladda ee heer Gobol, Degmo iyo deegaan kula xisaabtamaan fulinta iyo ku shaqeynta Barmaamijka Xisbiga, taasoo keenaysa isla-xisaabtan iyo dar-dar gelin Dawli ah oo si togan oo la taaban karo u gaadha mujtamaca Somaliland oo dhan.
Wariye: Saleban Cabdi Cali (Kalshaale)
Previous: Madaxweynaha Cusub Oo Magacaabay Maareeyaha Duulista Iyo Madaarrada Somaliland
Next: Su’aalo Sharci Oo Ka Dhashay Tallaabadii Koowaad Ee Madaxweynaha Cusub Qaaday